Semalt विशेषज्ञ पेशेवरहरु र सामग्री स्क्र्यापिंग को विपक्षमा विस्तृत
वेब स्क्र्यापि वेबसाइटहरूबाट खनन डाटाको एक धेरै लोकप्रिय विधि भएको छ। यो सामान्यतया एक स्वचालित प्रक्रिया हुन्छ जहाँ सफ्टवेयरले स्रोत वेब पृष्ठबाट डाटा निकाल्दछ। वेब स्क्र्यापि ofको शुरुआती चरणहरू खोज ईन्जिनले गरेको कार्यहरू जस्तै छन् जब तिनीहरू वेबसाइट क्रल गर्छन्। स्क्र्यापिंग, तथापि, एक कदम पछि जान्छ। यसले डाटा प्राप्त गर्दछ र यसलाई ढाँचामा रूपान्तरण गर्दछ जुन सजिलैसँग स्प्रिडशिट वा डाटाबेसमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। डाटालाई त्यसपछि कुनै पनि सम्भावित तरीकाले वेबमास्टरको मनसाय र योजनाहरू अनुकूल गर्न सकिन्छ।
सामग्री स्क्र्याप गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। केहि वेबमास्टरहरू (जस्तै मार्केटरहरू) प्राधिकरणबाट स्क्र्याप गरिएको सामग्री प्रयोग गर्दछन् वा अधिक सम्मानित साइटहरूले उनीहरूको साइटहरूमा सामग्री थपेमा बढी यातायात बढ्नेछ वा अन्य दीर्घ-अवधि रणनीतिहरूको सेवा दिनेछ। वेब स्क्र्यापि ofको अन्य प्रयोगहरूमा रियल ईस्टेट लिस्टि gatheringहरू जम्मा गर्ने, लिड जेनरेशनको लागि ईमेल ठेगाना भेला गर्ने, प्रतिस्पर्धीहरूको उत्पादन समीक्षा स्क्र्याप गर्ने, र सामाजिक नेटवर्कहरूबाट ट्रेन्डिंग समाचारहरू संकलन समावेश छ।
स्क्र्यापिंग सामग्रीसँग यसको अपसाइड र डाउनसाइडहरूको सेट छ। यदि तपाईं वेब स्क्र्यापिंग प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यी सुविधाहरू र बेफाइदाहरू बुझ्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
वेबबाट स्क्र्यापिंग सामग्रीका प्रमुख फाइदाहरू
१. वेब स्क्र्यापिंग वेब डेटा स collecting्कलन र विश्लेषण गर्ने सस्तो विधि हो, विशेष गरी यदि तपाइँ यसलाई नियमित रूपमा गर्न आवश्यक पर्दछ। वेब स्क्र्यापिंगले डेटा निकाल्ने काम कार्यकुशल र बजेट-अनुकूल तरिकाले गर्छ।
२. कुनै स्क्र्यापर लागू गर्न सजिलो छ यदि उचित मेकानिजम तैनात गरिएको छ। तपाइँ एक पटक वेब स्क्र्यापरमा लगानी गर्नुहुन्छ, र यसले तपाइँलाई सम्पूर्ण डोमेनबाट डेटाको विशाल रकम स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ।
Web. वेब स्क्र्यापिंग टेक्नोलोजीहरूलाई लगातार मर्मतको आवश्यकता पर्दैन र यसले तपाईंको समय र पैसा बचत गर्दछ जुन अन्यथा मर्मत गर्ने तालिकाहरूमा खर्च गरिन्छ।
High. उच्च गति र शुद्धता: त्रुटिहरू डाटा निकासीमा अप्रामाणिक छ किनकि एक साधारण त्रुटिले सम्पूर्ण डाटालाई कम उपयोगी वा पूर्णतया भ्रामक सेट गर्न सक्दछ। वेब स्क्र्यापिंगले डाटाको सहि एक्स्ट्र्यासनको लागि अनुमति दिँदछ र यसरी निर्णय गरीन्छ जब ब्यापार निर्णय लिनका लागि जानकारी सोर्सिंग गर्दा।
वेबबाट स्क्र्यापिंग सामग्रीको असक्षमता
१. स्क्र्याड गरिएको डाटालाई अझै सफाई र विश्लेषण आवश्यक छ: कार्य जसले धेरै समय र ऊर्जा लिन्छ।
२. सामग्री स्क्र्यापि सम्बन्धी जोखिमको साथ साइटको पहुँच मार्गनिर्देशनहरूको उल्लंघनको साथ आउँदछ।
Some. केही साइटहरूले साइट स्क्र्यापिंगलाई अनुमति दिँदैन। यद्यपि संरक्षित साइटमा उच्च-गुणवत्ता डाटा हुनसक्दछ, वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू यस्तो अवस्थामा पूर्ण रूपमा बेकार हुन्।
The. कोडमा थोरै परिवर्तनले हस्तक्षेप गर्न वा स्क्र्यापिंग सेवाको कामलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्छ।
जब यी सामग्रीहरू स्क्र्यापि R गर्नुहोस् REMEMBER यी स्क्र्यापिंग नियमहरूको पालना गर्न:
तपाईंले स्क्र्याप गर्ने योजना गर्नुभएको सामग्री प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित हुनुहुँदैन।
स्क्र्यापरले साइटको प्रयोगको सर्तलाई उल्ल .्घन गर्दैन।
तपाईंको स्क्र्यापिंग गतिविधिहरूले स्क्र्याप भइरहेको साइटको कार्यलाई असर गर्दैन।
निश्चित गर्नुहोस् कि स्क्र्याप गरिएको सामग्री उचित प्रयोगको मानकहरूको पालना गर्दछ।
सामग्री स्क्र्यापिंग पक्कै पनि वेब डाटा भेला गर्न को लागी एक शक्तिशाली उपकरण हो। यसको सम्भावित डाउनसाइडको साथ पनि, यसले धेरै वेबमास्टर्सहरूलाई डेटाको झिक्ने सरल, कम समय खपत गर्ने र बजेट मैत्री तरिका प्रदान गर्दछ। के तपाइँ नियमित रूप बाट वेब डाटा को भारी मात्रा निकाल्न को लागी आवश्यक छ? के डाटा तपाईंलाई धेरै वेब पृष्ठहरूमा फैलिएको छ? के तपाइँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जब केहि वेबपेजको जानकारी परिवर्तन हुन्छ? सामग्री स्क्र्यापि ofको आधारभूत कुराहरू सिक्नु तपाईंलाई यी चीजहरू आराम र सुविधाका साथ गर्न मद्दत गर्दछ।